Mateo 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
13 Saa da no, Yesu fii fie hɔ kɔtenaa mpoano, 2 na nnipakuw betwaa ne ho hyiae, enti ɔkɔforoo ɔkorow bi tenaa mu,+ na na nnipakuw no nyinaa gyinagyina po no ano. 3 Afei ɔde mfatoho kaa nsɛm pii kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Ogufo bi fii adi sɛ ɔrekogu aba;+ 4 ɔregu aba no, ebi koguu kwankyɛn, na nnomaa bedii.+ 5 Ebi nso koguu baabi a abotan wɔ a dɔte pii nni, na esiane sɛ ankɔ dɔte mu pii nti ntɛm ara na efifii.+ 6 Nanso bere a owia puei no ekisae, na esiane ntini a enni nti ewui.+ 7 Ebi nso koguu nsɔe mu, na nsɔe no nyinii na emiaa no.+ 8 Na ebi nso koguu asase pa mu na efii ase sow aba,+ ebi sow ɔha, ebi sow aduosia, na ebi nso sow aduasa.+ 9 Ma nea ɔwɔ aso no ntie.”+ 10 Enti asuafo no bisaa no sɛ: “Dɛn nti na wode mfatoho kasa kyerɛ wɔn?”+ 11 Obuaa wɔn sɛ: “Mo na wɔde ama mo sɛ monte ɔsoro ahenni ho ahintasɛm kronkron+ no ase, na wɔn de wɔmfa mmaa wɔn.+ 12 Na obiara a ɔwɔ no wɔbɛma no bi aka ho ma abu no so,+ na obiara a onni no de, wobegye nea ɔwɔ mpo afi ne nsam.+ 13 Eyi nti na mede mfatoho kasa kyerɛ wɔn, efisɛ wɔhwɛ de, nanso wɔhwɛ no kwa, na wɔte de, nanso wɔte no kwa, na wɔnte ase;+ 14 wɔn so na Yesaia nkɔmhyɛ no aba mu sɛ, ‘Ɔte de mobɛte nanso morente ase; ɔhwɛ de mobɛhwɛ nanso morenhu.+ 15 Efisɛ ɔman yi koma apirim, na wɔde wɔn aso atie kwa, na wɔakata wɔn aniwa; wɔamfa wɔn aniwa anhu, amfa wɔn aso antie, na wɔamfa wɔn koma ante ase ansakra, na masa wɔn yare.’+ 16 “Nanso anigye ne mo aniwa+ sɛ ehu ade, ne mo aso sɛ ɛte asɛm. 17 Nokwarem mise mo sɛ, adiyifo+ ne treneefo bebree pɛe sɛ wohu nneɛma a muhu yi nanso wɔanhu,+ na wɔpɛe sɛ wɔte nea mote yi nanso wɔante.+ 18 “Afei muntie ogufo ho mfatoho no.+ 19 Obiara a ɔte ahenni no ho asɛm na ɔnte ase no, ɔbɔnefo+ no ba behwim nea wɔagu no ne koma mu no; oyi ne nea woguu no kwankyɛn no. 20 Na nea woguu no abotan so no ne nea ɔte asɛm no na ntɛm ara ogye tom anigye so.+ 21 Nanso onni ntini biara na ɔtena hɔ kakra, na sɛ ahohia anaa ɔtaa ba esiane asɛm no nti a, ɛto no hintidua ntɛm ara.+ 22 Na nea woguu no nsɔe mu no ne nea ɔte asɛm no, nanso wiase* yi mu dadwen+ ne ahonyade nnaadaa mia asɛm no, na ɔnsow aba.+ 23 Na nea woguu no asase pa mu no ne nea ɔte asɛm no na ɔte ase, na ɔsow aba ankasa, ebi ɔha, ebi aduosia, na ebi nso aduasa.”+ 24 Ɔmaa wɔn mfatoho foforo sɛ: “Ɔsoro ahenni te sɛ ɔbarima bi a oguu aba pa wɔ n’afuw mu.+ 25 Bere a nnipa adeda no, ne tamfo ba beduaa nwura bɔne wɔ awi no mu na ogyaw hɔ kɔe. 26 Bere a eyiyii ahaban na ɛsow aba no, nwura bɔne no nso yii ne ho adi. 27 Enti ofiewura no nkoa bɛka kyerɛɛ no sɛ, ‘Owura, ɛnyɛ aba pa na wugui wɔ w’afuw no mu?+ Afei ɛyɛɛ dɛn na nwura bɔne aba mu yi?’+ 28 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Ɔtamfo bi na ɔbɛyɛɛ saa.’+ Wosee no sɛ, ‘Ɛnde so wopɛ sɛ yɛkɔ kɔboaboa ano anaa?’ 29 Ɔkae sɛ, ‘Dabi, efisɛ anhwɛ a, bere a moreboaboa ano no mubetutu awi no afra. 30 Momma ne nyinaa nnyin nkosi otwabere, na otwabere du a mɛka akyerɛ atwafo no sɛ, munni kan mmoaboa nwura no ano na monkyekyere no afiafi nkɔhyew,+ na afei mommoaboa awi no ano ngu m’asan so.’”+ 31 Ɔmaa wɔn mfatoho foforo+ sɛ: “Ɔsoro ahenni te sɛ sinapi aba+ a obi fa koduae n’afuw mu; 32 nokwarem no, ɛno ne aba nyinaa mu nea esua koraa, nanso sɛ enyin a, ɛbɛyɛ ɛfan a ɛsõ sen ɛfan biara, na ɛbɛyɛ dua ma ewim nnomaa+ bɛtena ne mmaa so.”+ 33 Ɔsan maa wɔn mfatoho foforo sɛ: “Ɔsoro ahenni te sɛ mmɔkaw+ a ɔbea bi de fraa esiam susukora akɛse abiɛsa kosii sɛ ne nyinaa kawee.” 34 Yesu de mfatoho na ɛkaa eyinom nyinaa kyerɛɛ nnipa akuwakuw no. Nokwarem no, wankasa ankyerɛ wɔn a mfatoho nka ho;+ 35 ɛno na ɛbɛma nea wɔnam odiyifo no so kae no aba mu sɛ: “Mebue m’ano mfatoho mu, mɛpae mu aka nsɛm a ahintaw fi nhyɛase no.”+ 36 Afei ogyaa nnipakuw no kwan, na ɔkɔɔ fie. Na n’asuafo no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Kyerɛkyerɛ afuw mu nwura bɔne ho mfatoho no mu kyerɛ yɛn.” 37 Obua see wɔn sɛ: “Nea oguu aba pa no ne onipa Ba no; 38 afuw no ne wiase;+ aba pa no ne ahenni mma no; nwura bɔne no ne ɔbɔnefo no mma,+ 39 na ɔtamfo a ogui no ne Ɔbonsam.+ Otwa+ bere no ne wiase nhyehyɛe awiei,+ na atwafo no ne abɔfo. 40 Enti, sɛnea wɔboaboa nwura bɔne no ano de ogya hyew no, saa ara na wiase nhyehyɛe no awiei bɛyɛ.+ 41 Onipa Ba no bɛsoma n’abɔfo, na wɔbɛboaboa biribiara a ɛto hintidua+ ne wɔn a wɔyɛ mmaratode ano afi n’ahenni no mu, 42 na wɔbɛtow wɔn agu ogya fononoo no mu.+ Ɛhɔ na wobesu atwɛre wɔn sẽ.+ 43 Saa bere no treneefo bɛhyerɛn+ paa sɛ owia+ wɔ wɔn Agya ahenni mu. Ma nea ɔwɔ aso no ntie.+ 44 “Ɔsoro ahenni te sɛ ademude bi a wɔde ahintaw wuram a obi kohui na ɔde siei; anigye a onyae nti ɔkɔtɔn+ nea ɔwɔ kɔtɔɔ saa asase no.+ 45 “Bio nso ɔsoro ahenni te sɛ oguadini bi a otu kwan kɔhwehwɛ nhene pa. 46 Bere a ohuu ahene biako a ne bo yɛ den no,+ ntɛm ara, ɔkɔtɔn nea ɔwɔ nyinaa kɔtɔe.+ 47 “Bio nso ɔsoro ahenni te sɛ asau a wɔagyaa agu po mu ma ayi mpataa ahorow pii.+ 48 Bere a ɛyɛɛ mã no, wɔtwe baa mpoano tenaa ase boaboaa papa+ no ano guu ade mu, nanso nea enye+ no de wɔtow gui. 49 Saa ara na ɛbɛyɛ wɔ wiase nhyehyɛe no awiei: abɔfo no bɛkɔ akoyiyi abɔnefo+ afi treneefo+ mu 50 na wɔbɛtow wɔn agu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na wobesu atwɛre wɔn sẽ.+ 51 Obisae sɛ: “So motee eyinom nyinaa ase?” Na wobuae sɛ: “Yiw.” 52 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ ɛte saa a, ɔkyerɛkyerɛfo biara a wɔakyerɛ no ɔsoro ahenni+ ho ade no te sɛ ofiewura bi a oyi nneɛma foforo ne dedaw adi fi n’akorade dan mu.”+ 53 Bere a Yesu de mfatoho ahorow yi ma wiei no, ofii hɔ kɔe. 54 Na ɔkɔɔ ne kurom no,+ ofii ase kyerɛkyerɛɛ wɔn wɔ wɔn hyiadan mu+ maa wɔn ho dwiriw wɔn, na wɔkae sɛ: “Ɛhe na onipa yi nyaa nyansa ne ahoɔdenne yi fii? 55 Ɛnyɛ duadwumfo no ba no ni?+ Ɛnyɛ ne maame na wɔfrɛ no Maria, na ne nuabarimanom nso wɔmfrɛ wɔn Yakobo ne Yosef ne Simon ne Yuda? 56 Na ne nuabeanom nso, ɛnyɛ yɛne wɔn ara na ɛwɔ ha?+ Ɛnde ɛhe na onipa yi nyaa eyinom nyinaa fii?”+ 57 Enti ɔbɛyɛɛ hintidua maa wɔn.+ Nanso Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ nidi bɛbɔ odiyifo a, na ɛyɛ n’ankasa kurom ne ne fie.”+ 58 Na gyidi a wonni nti wanyɛ ahoɔdenne bebree wɔ hɔ.+
^ Anaasɛ, “wiase nhyehyɛe.”